Warar - Maxay yihiin Faa'iidooyinka Nidaamka Waqtiga Kala-beddelka Kala-beddelashada?
Tan iyo markii uu soo baxay matoorka, dadku ma aysan joojin inay horumariyaan isaga, sidoo kale waxaan aragnay jiilal matoorro cusub oo wata barokacyo kala duwan yar iyo weyn. Kordhinta gawaarida, waxaan keenay dhibaato xagga tamarta ah oo aad u xun. , Saliida, oo ah kheyraad aan dib loo cusbooneysiin karin, ayaa si tartiib tartiib ah loogu daalay qodista maalinlaha ah. Jiilaal ahaan, ma tixgelinayno arrimaha tamarta ama uma keydinno xoogaa kheyraad ah jiilka soo socda. Iyada oo dadaalkeena injineernimada, waxaan soo saarnay nooc cusub oo ah mishiinka keydinta tamarta oo keenay farsamooyin keydinta shidaalka. Maanta gawaarida alaab-qeybiyaha waalka ayaa kula wadaagi doona faa iidooyinka nidaamka waqtiga kala wareega waalka.
Marka lagu daro ceejinta iyo marawaxadaha (ama kororka farsamada), qaybaha saameeya hawada ku jirta silsiladda waxaa ka mid ah filtarka.
Guud ahaan marka laga hadlayo, waalka doorsoomaha waxaa kujira dhowr nooc oo kaladuwan oo doorsoomayaal ah: Waqtiga isbeddelka ee dhinaca qaadashada, wiishka wax qaadashada ee dhinaca qaadashada, waqtiga isbeddelka ee dhinaca qiiqa, iyo wiishka isbeddelka ee dhinaca qaaca. Mashiinnada qaar waxay leeyihiin mid ka mid ah, qaar ka mid ah matooradana waxay leeyihiin dhowr ka mid ah isla waqtigaas. Sidaa darteed, tiknoolajiyada "qaadashada isbeddelka" ee matoorada kaladuwan daruuri maahan isku mid marka loo eego qaabdhismeedka.
Mabda'a waqtiga isbeddelka waalka
Mabda'a shaqada ee mashiinka shidaalka afar-cirif leh ee aan aqoon u leenahay. Afarta faalig shaqo ee soo nuugida, cadaadiska, shaqada, qiiqa, iyo shaqada wareegga joogtada ah ee mishiinku waxay leeyihiin saameyn aan kala sooc lahayn oo ku saabsan furitaanka iyo xiritaanka ceejinta. Qof kastaa wuu ogyahay in waalka uu kaxeeyo crankshaft-ka mashiinka iyada oo loo marayo camshaft, waqtiga waabku wuxuu kuxiranyahay xagalka wareega ee kamshaftka. Mashiinka caadiga ah, waqtiga furitaanka iyo xiritaanka waalka qaadashada iyo waalka qiiqa waa lagu hagaajiyaa. Waqtigaan go'an waa adag tahay in lagu xisaabtamo shuruudaha shaqada ee mashiinka xawaare kala duwan leh. Waxaan dooneynaa inaan ka dhigno mishiinka inuu gaaro heer wax ku ool ah Badiyaa waxaan wax ka badalnaa angle xagalka xaglaha camshaft si loo badalo waqtiga furitaanka iyo xiritaanka ceelka si loo gaaro waqtiga shaqada ugu dhaqsaha badan si loo soo saaro tamar firfircoon. Hadda waxaan haysannaa waqtigii waalka ee isbeddelka si tan si fudud loogu xalliyo. Teknolojiyada.
Tikniyoolajiyadda waqtiga kala-beddelka isbeddelku waa qaab-dhismeed fudud iyo nidaam farsamo qiimo-jaban ku leh dhammaan tikniyoolajiyadda waqtiga kala-beddelka. Waxay u adeegsaneysaa habab gudbinta haydarooliga iyo maareynta si ay si firfircoon ugu hagaajiso waqtiga waalka iyadoo loo eegayo baahida mashiinka. Waqtiga waalka isbedbeddelka ahi ma beddeli karo muddada furitaanka waalka, laakiin wuxuu xakamayn karaa oo keliya waqtiga la furayo ama la xidhayo waalka hore. Isla mar ahaantaana, ma xakamayn karto istaroogga furitaanka furitaanka sida camshaft is bedbeddela, markaa saamayn xadidan ayey ku leedahay hagaajinta waxqabadka mishiinka.
Marka la eego waqtiga waalka bedbeddela, mishiinka HONDA wuxuu leeyahay hoggaan cayiman. Markuu matoorku ku shaqeynayo culeys yar, bistoolada yar waxay ku jirtaa booska asalka, sedexda gacmoodna waa la kala saarayaa. Kaamka weyn iyo kaamka labaad ayaa riixaya dhagaxa weyn ee gacanta iyo midka labaad ee dhagaxa weyn siday u kala horreeyaan. Xakamee furitaanka iyo xiritaanka labada waalka qaadashada, wiishka wiishka wuu ka yar yahay, xaaladdu waa sida mashiin caadi ah. In kasta oo kamaradda dhexe ay sidoo kale riixdo gacanta dhagaxa dhexe, maxaa yeelay gacmaha gantaalaha ayaa kala maqan, labada gacmood ee kale ayaga ma koontaroolo, marka xaaladda furitaanka iyo xiritaanka waalka wax saameyn ah kuma yeelan doono.
Laakiin marka mishiinku gaaro xawaare sare oo go'an (tusaale ahaan, marka gaariga isboortiga ee Honda S2000 uu gaaro 5500 rpm saacadda 3500), kumbuyuutarka ayaa ku amri doona qalabka soodhiga ah si uu u dhaqaajiyo nidaamka hidda iyo riixista bistoolada yar ee gacanta samee sedexda gacmood ee gantaalaha oo isku xiran hal jidh waxaana wada kaameerada dhexe. Maaddaama kamaradda dhexe ay ka sarreyso kuwa kale oo ay wiishkeedu ka weyn yahay. Qaybaha gawaarida gawaarida gawaarida waa la dheereeyey wiishkiina waa la kordhiyey. Marka xawaaraha mashiinku hoos ugu dhaco qaybo xawaare hoose ah, cadaadiska haydarka ee gacanta dhagaxa sidoo kale wuu yaraadaa, pistonku wuxuu ku noqdaa meeshiisii ​​hore asagoo ku gudajiray ficilkii guga soo noqoshada, iyo sedexda gacmood ee gantaalaha.
Sidan ayaad ku xakameyn kartaa isticmaalkaaga shidaalka xawaare hoose, isla mar ahaantaana buuxineysaa baahiyahaaga kororka soo-saarka korantada marka mashiinku xawaare sare ku socdo. Nidaamka VTEC oo dhan waxaa gacanta ku haya kombiyuutarka weyn ee mashiinka (ECU). ECU waxay heshaa oo ay farsameysaa xuduudaha dareemayaasha mishiinka (oo ay kujiraan xawaaraha, cadaadiska qaadashada, xawaaraha gaariga, heerkulka biyaha, iwm.), Soo saarida calaamadaha koontaroolka ee u dhigma, waxayna hagaajineysaa nidaamka qalabka hidaha ee loo yaqaan 'piston rocker' iyada oo loo marayo qalabka 'solenoid valves' Si mashiinka loo xakameeyo. cams kala duwan oo xawaare kala duwan leh, taas oo saameysa furitaanka iyo waqtiga waalka qaadashada. Marka si aad u soo saarto soosaarka korontada waxaad rajeyneysaa inaad hesho.